Maalinta: Oktoobar 28, 2019
Wadooyinka qaar ayaa loo xiri doonaa taraafikada magaalada Bursa sababtuna tahay Xuska 29 Oktoobar oo ah xuska Maalinta Jamhuuriyadda Qaybta Booliska Bursa ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay, X 96. Bandhig iyo xaflad loo qabanayo qaab dhismeedka barnaamijyada dabaaldega xafladda [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, 29 Oktoobar 2019 waxay go’aansatay Talaadadii in adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Istanbul oo dhan ay noqon doonaan lacag la’aan iyadoo loo eegayo Maalinta Jamhuuriyada. Sida ku xusan go'aanka, xariiqda nidaamka tareenka ee Metro Istanbul [More ...]
Xubnaha CouncilBB Council iyo İETT maamuleyaal ayaa ku safray khadka 11ÜS (Üsküdar-Sultanbeyli). Xaqiiqdii, xubnaha baarlamaanka iyo xafiisyada xafiisyada, oo lahadlaya muwaadiniinta ayaa dhagaystay dhibaatooyinka iyo talooyinka. Xiriir la leh Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Ordu (TSO) Levent Yıldırım ayaa yidhi, “Samsun Sarp Railway waa mashruuc ka deg deg badan marka loo eego dalka iyo gobolka. Hadday tahay wado tareen laga dhisi doono gobolka, Samsun Sarp Railway [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay sii wadaysaa hirgelinta jardiinooyin casri iyo kuwa dhaadheer oo leh meelo cagaaran oo magaalada ah. İSPARK, Bağcılar Göztepe Subsoil oo loogu talagalay gawaarida 170 oo ay dhameystirtay Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul. [More ...]
Alanya Duqa magaalada Yucel, oo la kulmay kooxda ardayda kana socota Degmadda Manavgat Municipal Park Park Park oo ah midka kaliya ee gobolka ka jira, ayaa ka hadlay ahmiyada ay leedahay la sheekaysiga caruurta iyo in laga taxadiro taraafikada. tusaale u ah Turkiga [More ...]
30 ayaa loo xirayaa taraafikada bisha Oktoobar. Degmada Arapsuyu ee Wadada Degmada Degmada Konyaalti, Degmada Antalya ee Magaalo Weyn iyadoo ay ugu wacan tahay howlaha dayactirka asphalt ayaa loo xiri doonaa taraafikada marxaladaha laga bilaabo Oktoobar ilaa 30 Oktoobar. Gaadiidka Dawladda Hoose ee Antalya [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Sakarya waxay sii wadaa martigelinta martida dooxada Baaskiilka Sunflower. Ugu dambayntiina, Bike Valley, oo ay martigeliyaan ardayda yar-yar ee Dugsiga Hoose ee Budaklar, carruurta waxaa la siiyaa tababar wadis ammaan ah iyo sidoo kale [More ...]